Khilaafka madaxda Soomaaliya oo sababay in USA ka baaqsato shirka Copenhagen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Mareykanka ayaa ka baaqsatay ka qeybgalka Shirka Heerkiisu sarreeyo, kaasoo looga hadlayo aarimaha Soomaaliya oo la qorsheeyey inuu ka dhaco magaalada Copenhagen ee dalka Denmark 19-20 bishan November.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka, oo lagu magacaabo Jen Psaki ayaa sheegtay in Mareykanku aad uga walaacsan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweyne Xasan Shekh iyo R/wasaare Cabdiweli Sheekh>
Mareykanka ayaa xusay inuu aad uga walaacsan yahay mooshinka lga diryaariyey R/wasaare Cabdweli Sheekh ee la doonayo in kalsoonida loogala laabto.
Jen Psaki ayaa sheegtay in Mareykanku ku dhegan yahay mabaadii’da New Deal ee loogu tala galay in Soomaaliya doorasho ku gaarto sanadka 2016.
Sida ay sheegtay Jen Psaki, maadaama ay is khilaafeen madaxda dowladda Soomaaliya, Mareykanka go’aansaday inuusan wax wakiil ah u dirsan shirka dhawaan ka dhacaya dalka Denmarka oo dib loogu eegayo horumarka ay sameysay dowladda Soomaaliya.
5-tii bishaan ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxey mooshin kalsooni kala laabasho ah ka gudbiyeen R/wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Madaxweynaha iyo R/wasaaraha ayaa aad isugu dhacay kadib markii 25-kii October uu Cabdiweli Sheekh isku shaandheyn kooban ku sameeyey golaha wasiiarada, waxaana taasi keentay in xildhibaano ku saf ah madaxweynaha ay mooshin ka keenaan R/wasaaraha, kaasoo la filayo in maanta oo Salaaso ah la horgeeyo xildhbaanada.